မြန်မာနိုင်ငံဆီ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည် ပိုလာစေချင်တယ် ဆိုရင်တတိယတန်းစား ဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံများရှိ ပြင်ညီတာဝန်ခံမူ (၂)စကော့တလန်က သင်ခန်းစာအမျိုးသမီးများအပေါ် ကျောင်းများက ခွဲခြားကန့်သတ်နေမှုများ ရပ်သင့်ပြီ
Andrew Kham December 18, 2012 - 7:55 pm Welcome Irrawady . I am so happy to haer that.
Reply Htwe Htwe December 18, 2012 - 10:06 pm Welcome Irrawaddy!
Reply Mg Mg Myint December 29, 2012 - 9:23 am You are welcome IRRAWADDY !
Reply Maung Win December 29, 2012 - 10:20 pm ယ္ခုလဲ ဗိုလ်ချုပ်တွေဘဲ အုပ်ချုပနေပါတယ် ဧရာဝတီရေ သတိတော့ထားစေချင်တယ်
Reply james December 31, 2012 - 3:31 pm Congratulations!
Reply ဇော်ဇော်အောင် January 6, 2013 - 9:50 am trust no body.if no one is willing to stand by you,walk alone.